FARACA DHARKEENLEY OO DAAHA LAGA ROGEY!!! – Hope Generation – جيل الأمل
FARACA DHARKEENLEY OO DAAHA LAGA ROGEY!!!
Barnaamij qurux badan oo si heer sare ah loo soo agaasimay oo ay goob joog ka ahaayeen xubnaha jiilul amal ee faraca degmadda DHARKEENLEY iyo madax ka socotay golaha dhexe ee ururka ayaa ka dhacday isla degmaddaas.
Munaasabadda ayaa lagu dooranayey guddoomiyaha faraca DHARKEENLEY u matali doona urur weynaha sii baahaya ee Jiilul Amal. Kadib tartan xor ah oo xalaal ah ayaa si daahfurnaan ah loogu doortay guddoomiye Mudane C/samad Maxamed Sh. Xasan oo ku guuleystay cod aqlabiyad ah.
Dhammaan tartamayaashii la baratameysay guddoomiye C/samad ayaa u hambalyeeyey guddoomiyaha, islamarkaana balan qaaday inay la shaqeynayaan. Dhanka kale na guddoomiyaha oo hadal kooban ka jeediyey munaasabadda ayaa sheegay inuu kasoo dhalaali doono mas’uuliyadda culus ee loo igmaday.
Munaasabadda ayaa jawi farxadi ku dheehan tahay kusoo idlaatay. Waana faracii afaraad ee Hope Generation ka furo Gobolka Banaadir, waxaana ha horeeyey faracayadda degmooyinka Yaaqshiid ,Warta Nabadda iyo Kaxda oo lafuray bilowgii iyo bartamihii sanadkan 2016.